ပွဲတက်လာသူတွေ အကုန် ငေးမောယူခဲ့ရတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ ? – Burmese Online News
ခင်ဝင့်ဝါကတော့ “Fair & Lovely ဖောင်ဒေးရှင်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို တတ် ဖြစ်ပါတယ်? ဒီပွဲလေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးများရဲ့ စိတ်ခွန်အားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုမိုတောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တွေကို ဖန်တီးဖို့အတွက် ပညာသင်ဆုတွေနဲ့ ဘဝတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ် လို့ ဝင် ရောက် လျှောက် ထားဖို့ဖိတ်ခေါ် လိုက် ပါတယ် အချစ်ဆုံးတို့ ❤️” ဆိုပြီး လှရက်လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါကတော့ လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်တင်မကပဲ၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းတွေ၊ ပရဟိတတွေဆိုလည်း လက်မနှေးတဲ့ ခေးကတော့ မကြာခဏဆိုသလို ကုသိုလ်ရေးတွေလည်း လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးတုန်းက ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေကို လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နော်ဖောအယ်ထား